Mharidzo: Ana Lena Rivera naDavid López Sandoval | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Zviitiko, Novela, Nhema nhema, Nhetembo
Ndakadzinga Kukadzi ndichienda maviri mharidzo yemabhuku akasiyana kwazvo nevanyori. Musi wa27 zvaive Izvo vakafa vanonyarara, kubva kune mumwe wangu munyori uye mumwe munyori pamwe neni pane ino blog, Ana Lena Rivera. Uye musi wa28 ini ndaive mu Kuverenga, kubva mudetembi weCordovan David López Sandoval, uyo anga asina kuverenga uye ndiani ainyatsoda. Idzi dzaive maonero angu maererano nenzvimbo dzayo nematoni.
1.1 Izvo vakafa vakanyarara - Ana Lena Rivera
2.1 Kuverengera - David López Sandoval
Izvo vakafa vanonyarara - Ana Lena Rivera
Kukadzi 27. Francisco Umbral Library, Majadahonda.
Ndaida kusangana naAna chaiko. Kumushuvira zvakanak pane rake guru rekunyora dhisiki neiyi Torrente Ballester 2017 inokunda novel uye nekuti anogara achitipa tarenda rake pane ino blog. Uye zvakare kumuudza uye kumukurudzira kuti anakidzwe nezviitiko, masiginecha uye kusangana nevadzidzi, avo vanokuziva uye nevasingakuzive.
Ini ndinogovana ruzivo rwako, kunyange zvisiri pachiyero chako. Asi, kana kamwe chete, isu tese tinonyora tinofanirwa kunge tiri munzvimbo iyoyo, pamberi peshamwari kana vatisingazive vanokuverenga kana kukuwana nekusaina nyaya yakabuda mukufunga kwako. Muchiitiko chaAna pane atovepo mashoma mashoma nemasaini, uye izvo zvasara. Uye dai vese vakaita seuyo kubva wekupedzisira 27 mune izvo raibhurari reguta rake, raive kufashukira neshamwari, vaunoziva uye vasingazivikanwe vaverengi, vazhinji vacho vaive vatoverenga bhuku rake.
Chiito (izwi rekuti "chiitiko" rinowanzo kundipa mikoko), iyo yaiitwa nevanhu vaitarisira chitoro chemabhuku Blondes akaverengawo yeMajadahonda, yakaitika mu akasununguka kwazvo uye anonakidza toni. Kutaurirana pakati peshamwari mbiri pane kuita pakati pemunyori, mutengesi wemabhuku kana beta muverengi, sezvakaitika nemuridzi weAna.
Saka, iyo inozivikanwa kuongororwazve kwebhuku, rangano rayo, mavara uye nharaunda zvakachinjaniswa nemhinduro dzemibvunzo zvakauya. Ana akataura nezve zvese kubva paudiki hwake zvishuwo zvekunyora, kwaari rakabudirira basa rehunyanzvi semunhu mukuru semaneja kunze kwenyika yekomputa, kusvikira kudzidziswa kwake semunyori Yakaguma zvakanyanyisa. Apa akandipa iyi hurukuro munguva pfupi yapfuura.
Akataura zvakare nezve nzira yekugadzira yenyaya iyi uye nguva dzose aibata nevaya varipo. Akatikoka kuti tibvunze mibvunzo kana kutaura nezvenyaya iyi neavo vakanga vatoiverenga, zviri pachena vachidzivirira zvakapambwa. Muchidimbu, chaive chiitiko chepedyo, chakavhurika uye chekutora chikamu, iyo yakaguma nesigine yakajairwa. Ini handina kukwanisa kugara kusvika kumagumo, asi ini ndakatora siginecha yangu uye pozi yangu nemunyori, zvakasikwa. Uye ini ndatotanga kuverenga izvo Izvo vakafa vanonyarara nemaonero akanaka.
1. Kuzvitsaurira kwaAna Lena Rivera. Ndinokutendai… 2. David López Sandoval naLuis Alberto de Cuenca.
Kuverenga - David López Sandoval
Kukadzi 28. Chitoro cheNakama, Pelayo mumugwagwa, Madrid.
Zuva rakatevera kwaive kuratidzwa kweizvi nhetembo pfupi yanyanduri yandaisaziva asi yandaifarira zvikuru. Y iyo nguva, mhepo, vatambi uye matauriro aive akasiyana zvakadii.
López Sandoval chiremba muSpanish Philology uye purofesa weLimi uye akatoburitsa bhuku, Rwendo rweParnassus, uye mabhuku enhetembo Castaways o Rwendo rwegamba. Nezvo Kuverenga akunda iyo XXXIV Jaén Nhetembo Mubairo uye akaiisa mune ino yakavanda chitoro chemabhuku munzvimbo yeChueca yeMadrid neruoko rweyezve philologist, mudetembi, munyori wenhau uye mupepeti Luis Alberto weCuenca.
Uye semamwe manheru emanhetembo akakosha munyu mhepo yakatenderera haigone kuunganidzwa pasina vanopfuura vechipiri vabatsiri, kana vakasvika, vane hunhu hwakasiyana pakati mapurofesa efilosofi, mutauro, mabhuku, vaimbi uye kubva kune dzimwe dzidziso. Uye mumwezve akapinda munyori weprozi seni.
De Cuenca akadziviswa, achiimba rumbidzo kuna bard uye mareferenzi kune zvekare uye venguva dzepano nhetembo dzenyika, pamwe nekubatana nemumhanzi neuzivi. Akaongorora nhetembo ndokupa zvimwe zvekuseka kana kupokana achibva asuma nyanduri.
Unganidzo yaSandoval yenhetembo inotaurisa misoro dzakasiyana iko iko kweiyo rufu Mune zvese zvarinoreva kana chokwadi, asi kunyatso kutya uye kunetseka pamberi pazvo zvinorevawo kuti isu tiri vapenyu uye tinodawo kurarama sezvazviri. Ndokunge, tIchowo chikumbiro chehupenyu uko mudetembi anopa mafomu mazhinji senge ari haikus uye sonnets. Uye iwe unogona kuona maungira e Cernuda vakakwira Gil de Biedma uye kunyangwe zvekare echiGiriki senge Heraclitus.
Iyi ndeimwe yenhetembo:
Kunyangwe hazvo manheru ano mararamire achipukunyuka kubva pamoto
uye mhepo inozunungusa matavi emiti,
kunyange hazvo manheru ano dombo richikunguruka kudzika
senge husiku hwese hwehupenyu hwako kusvika zvino,
kunyangwe paine zvakawanda zvishuwo zvakamirira
kuenderera uchitenda kuti kune hurongwa husingaperi,
vasina mitemo kana tariro, vasingatyi zvinoitika,
Kupfuura zvese, edza kufara.
Anofara nekuti kurwira kusvika pamusoro
zvakakwana kuzadza moyo wemurume.
Zvakare, hongu, munyori akaverenga vamwe ndokupindura iyo (mishoma, hongu) mibvunzo kubva kune vaipinda. Yakapotsa yawedzera kuva yakawanda colloquium izvo zvaisanganisira kubva mareferensi kune iwo echinyakare saHeraclitus (Ndezvaunazvo kana paine vafilosofi shamwari dzinokukurudzira kana kukuendesa muchiuno) kunyangwe nei akapihwa Nobel kubva Zvinyorwa kusvika Bob Dylan ndeipi iri nani Leonard Cohen. Uye ipapo tinofunga izvozvo Bruce Springsteen anodya Dylan naCohen nemapatatisi uye ketchup taifanira kuruma chibhakera kuti tirege kusvetuka nacho Mazuva ekubwinya.
Chiito chakapedza iyo siginecha yemakopi y kuenda kunonwa munhu wese, kusanganisira munyori, kujoini iri pamberi pechitoro chemabhuku.
Izvozvo iwe unofanirwa kuedza kuenda kune ese anogona kunyora zvinyorwa saraos uye nepfungwa (kwete misoro) yakavhurika. Nekuti zvese zvinonakidza. Nedingindira, munyori, nharaunda nematoni. Hazvina basa. Mumwe anogona kuwana zvakawanda zvinoshamisa uye kusangana nevanhu vemarudzi ese uye mamiriro, asi nechishuwo chemabhuku mutsinga dzake uye nemhando dzacho dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zviitiko » Mharidzo: Ana Lena Rivera naDavid López Sandoval
5 dzakasiyana dzemapepanhau dzemwedzi waKurume